Allgedo.com » Ahlu Sunna oo balan qaaday in Shabaab ay ka saari doonto Galgaduud
Print here| By: allgedo.com: Saturday, January 5, 2013 // Jawaabaha waa la xiray
Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee goboladda dhexe dalka ayaa shaaca ka qaaday in ay qorshaynayaan weerar dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab-ka gobolkaas kusugan.
Xili uu lahadlayay saxaafada ayaa Sheekh Maxamed Cartan Shuuriye oo ka mid ah saraakiisha Ahlu sunna ee gobolada Dhexe ee dalka waxaa uu sheegay in Ahlu sunna ay diyaar u tahay la dagaalanka Alshabaabka ku sugan Galgaduud.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayuu sheegay inay baaq ujeedinayaan taasi oo ah in laga qabto dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ku hayaan shacabka ku nool deeganada Gobalada Dhexe oo ay Shabaabka maamulaan.
Isagoo hadalkiisa sii wata Sheekh Maxamed Cartan Shuuriye ayaa sheegay in Ururka Al-Shabaab ay dhibaatooyin adag ku hayaan shacabka ku nool Gobalada dhexe loona baahan yahay in wax laga qabto.
Hadalkan Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa kusoo aadaya xili Shabaab ay gobolkaas ku leeyihiin awood buuxda gaar ahaan degmooyinka Ceel-Buur, Ceel-dheere, Galhareeri.